Mogadishu Journal » 2019 » March » 12
Mjournal :-Madaxweynaha Faransiiska Emmanuel Macron ayaa booqasho uu ku marayo dalal ku yaal qaarada Afrika waxa uu ka bilaabay dalka Jabuuti oo xiriir qoto dheer ah ay wadaagaan. Madaxweyne Ismaaciil Cumar Gelle ayaa ku soo dhaweeyay garoonka diyaaradaha Jabuuti, waxaana kadib...
Maxkamad u yeertay guddoomiyaha degmada Hodan
Mjournal :-Guddoomiyaha Maxkamada Racfaanka G/ Banaadir warqad caawa xafiiskiisa ka soo baxday ayaa lagu amray in Guddoomiyaha Degmada Hodan Cabdixakiin Dhagajuun uu Maxkamada hor yimaado si su’aalo looga waydiiyo eedeymo loo haysto. Guddoomiyaha ayaa loo heystaa in uu ku...
Siyaasiyiin ka walaacsan Safarka Kheyre ee Kismaayo
Mjournal :-Qaar ka mid ah Siyaasiyiinta kasoo jeedda degaanada maamulka Jubbaland oo maanta shir ku yeeshay Magaalada Muqdisho ayaa walaac ka muujiyay Safarka Ra’iisul Wasaaraha Soomaaliya uu ku tagay Magaalada Kismaayo. Xildhibaan Cabdirashiid Xidig oo ka mid ah Xildhibaanada...
Mareykanka oo la sheegay in askari looga dilay dagaal ka dhacay Shabeellaha Hoose
Mjournal :-Ciidamada milatariga Maraykanka ayaa xaqiijiyey in xalay ay duqeyn ka gaysteen degaanka Daarasalaam ee u dhow magaalada Awdheegle, iyaga oo gacan siinayey ciidamada Soomaalida oo ay soo weerareen Al-Shabaab. Maraykanku faah-faahin kama bixin khasaaraha ay duqyantaasi...
Taliyihii ciidamada Daraawiishta Puntland oo is casilay iyo sababta oo la ogaaday
Mjournal :-Wararka aan ka heleyno maamulka Puntland ayaa sheegaya in uu is casilay Taliyihii Ciidanka Daraawiishta Puntland Gen: Cabdi Shugri Cabdulaahi Xuseen, waxaana la sheegay in Warqada is casilaadiisa u gudbiyay Madaxweyne Saciid Deni. Iscasilaada taliyaha ayaa la sheegay...
Zinadine Zidane oo markale loo Magacaabay Tababaraha Kooxda Real Madrid
War hadda soo dhacay oo la xiriira dhinaca Cayaaraha ayaa waxa uu sheegayaa in Kooxda Kubadda Cagta ee Real Madrid ay heshiis kale la saxiixatay Tababarahoodii hore ee Zinadine Zidane kaas oo markale leylin doona Kooxdaas. Tababare Zidane ayaa Kooxda Real Madrid waxa uu la...
Sawiro: Shirka kobcinta Dhaqaalaha Afrika oo furmay iyo Farmaajo oo ka qeybgalaya
Mjournal :-Magalada Kampala ee dalka Uganda waxaa Maanta ka furmay shir looga hadlayo horumarinta iyo kobcinta Dhaqaalaha Qaarada Afrika, ee (Afrika Now), waxaana shirkaas Soomaaliya u matalaya Madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. Shirka oo socon...
Nin u dhashay dalka Gariiga oo noqday qofka kaliya ee ka badbaaday diyaaradii burburtay
Mjournal :-Nin u dhashay dalka Giriiga ayay ka tagtay diyaaraddii burburtay ee Ethiopian Airlines kadib markii uu soo daahay 2 daqiiqo oo kaliya, islamarkaasna ay shaqaalaha garoonka gacan ka siin waayeen in uu galo diyaaradda. Antonis Mavropoulos ayaa sheegay in ay u ahayd...
Aabe iyo Wiilkiisa oo laga afduubtay deegaan ka tirsan G Galgaduud
Mjournal :-Saacadihii la soo dhaafay ayaa ilaa laba ruux waxaa laga afduubtay degaanka Gal-Qoryaale oo hoos taga Degmada Guri-ceel ee Gobolka Gal-gaduud,waxaana dadkaasi inay afduubteen lagu eedeeyey Ururka Al-Shabaab. Warbaahinta Dowladda ayaa shaacisay in dadka la afduubtay oo...
Ra’iisul Wasaare Kheyre oo Kulamo ka wada Magaalada Kismaayo
Mjournal :-Ra’iisul Wasaaraha Xukuumadda Federaalka Soomaaliya Xasan Cali Kheyre oo ku sugan Magaalada Kismaayo ayaa waxa uu kulamo gooni gooni ah la qaatay Mas’uuliyiin ka tirsan dowlad Goboleedka Jubbaland. Kulamadaan ayaa waxaa looga hadlay sidii dowladda dhexe iyo maamulka...
Ciidamo isugu jira Soomaali iyo Ajnabi oo weerar ka fuliyay Shabeelaha Hoose
Mjournal :-Wararka naga soo gaaraya Gobolka Shabeellaha hoose ayaa waxa ay sheegayaan in xalay Ciidamo ka tirsan kuwa Kumaandoosta Soomaaliya iyo kuwa Mareykan ah ay weerar ku qaadeen deegaanka Daaru-Salaam oo hoostaga degmada Awdheegle ee Gobolka Shabeellaha Hoose. Deegaanka...